ဆော့ဝဲ မြို့တော် - ရွှေမြို့တော်
ရွှေမြို့တော်မိမိ စာမျက်နှာမိမိစာမျက်နှာအလှဆင်နည်းအိမ်ကုတ်များယူရန်(၁)အိမ်ကုတ်များယူရန်(၂)ရုပ်ပုံကွန်မန့်ပေးနည်းမိမိအိမ်မှ မြှားအလှဆင်ဖိတ်ခေါ်ရန်အဖွဲ့ဝင်များဗီဒီယိုများဗီဒီယိုFlash Song လေးများဓါတ်ပုံများတင်ရန်FLASHSONGSဗီဒီယိုနည်းပညာဆိုင်ရာကဗျာဘလော့ပို(စ်)ဥာဏ်စမ်းဟာသဥာဏ်စမ်းတမ်းကစားကြမယ်ဖိုရမ်တွင်းစာပေဘလော့များဟာသနည်းပညာများစည်းကမ်းချက်များဖတ်ရန်စကားပြောခန်းမြို့တော်မှတ်တမ်း
အောက်တိုဘာလ 26, 2010 တွင် 12:18am အချိန် Ko Nyein မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် တင်ပြခဲ့ပါတယ်
ဒီနေရာလေမှာ လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေတောင်းဆိုနိုင်ပြီး ပေးထားတဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုလည်းဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်
ဗွီဒီယိုတွေကိုmp3 mp4ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့Total Video Converter v2.52.download
နောက်ဆုံးထွက်ရှိသောစီဒီများကို download လုပ်ယူနိူင်ပါတယ်
MP3 သီချင်းတွေကို ဒီနေရာကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်
ကြိုက်ရာဒေါင်းနိုင်သည် Top Downloads
အမျိုးအစား: ဆော့ဝဲဒေါင်းလုပ် ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 10 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
Permalink အောက်တိုဘာလ 26, 2010 တွင် 5:02am အချိန်မှာ wai lin tun မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် i would like to get wondershare photo movies maker.pls help me.thank u so much.
Permalink ဇန်န၀ါရီလ 29, 2011 တွင် 11:59pm အချိန်မှာ ကျော်ကျော် မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကို.ကျွှန်တော်..စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါ...တရွက်ချင်းလှန်ပြီးဖတ်လို့ရတဲ့ဆော့ဝဲရချင်လို့......စာအုပ်တွေဒေါင်းလာပြီးရင်.....ဖိုင်ထဲမှာအရှည်ကြီး.............ဆွဲချပြီးဖတ်နေရလို့....ဟို...လေ..စာအုပ်လိုမျိုးလှန်ဖတ်ချင်လို့..အဲလိုမျိုးရှိလား......ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ.......သိချင်လို့ပါ.....ရှိရင်တင်ပေးနော်..
Permalink သြဂုတ်လ 6, 2011 တွင် 11:06pm အချိန်မှာ ဇာနည် မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ကျနော်သိသလောက်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်...စာရွက်ကို တစ်ရွက်ချင်းလှန်ဖတ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေး တစ်ခုတော့ တွေ့ ဖူးလို့ပါ... သူကတော့ Mart view လို့ခေါ်ပါတယ်...PDF ဖိုင်တွေ ဖတ်လို့ရတဲ့အပြင် အဲဒီထဲမှာ မိမိသုံးတဲ့ proxy ထည့်ပေးထားရင် ကိုလိုချင်တဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများပါ ရှာဖွေပြီး ဒေါင်းယူလို့ရပါတယ် http://www.cnet.com/1770-5_1-0.html?query=Mart+View&tag=srch ဒီလင့်လေးကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
Permalink အောက်တိုဘာလ 29, 2010 တွင် 4:35pm အချိန်မှာ သဇင်အေး မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ကျေးဇူးအရမ်းအရမ်း တင်ပါတယ် နော်..AutoCAD 64bit အတွက်လည်း ရှာပေးပါအုံးနော်..
Permalink ဇန်န၀ါရီလ 13, 2011 တွင် 12:19pm အချိန်မှာ Ko phyo မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် သဇင်အေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်............
Winter.jpg, 103 KB Sunset.jpg, 57 KB ▶ ပြန်လည်ပြောဆိုဝေဖန်ရန်
Permalink နိုဝင်ဘာလ 1, 2010 တွင် 6:43pm အချိန်မှာ နေနိူင် မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကိုရေ virus သက်တဲ့ ဆော့ ဝဲလေးလိုချင်ပါတယ်
Permalink နိုဝင်ဘာလ 28, 2010 တွင် 3:43pm အချိန်မှာ hsanghein မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ဘယ်အမျိုးစားလဲဗျ... antivirus software တွေက အများကြီးပဲ။ ဘယ်ဟာလိုချင်လဲ ကျနော့်မှာ အစုံရှိတယ်။
Permalink နိုဝင်ဘာလ 13, 2010 တွင် 4:26pm အချိန်မှာ ပါဝါ ( Power) မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကိုရေ... ကျတော့ထက်ငယ်လားကြီးလားတော့မသိဘူး..အကိုလို့ပဲခေါ်လိုက်ပါ့မယ်... ကျတော် အကူအညီတစ် ခုတောင်းချင်လို့ပါ.... ကျတော်နဲ့ ကျတော့်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ပေါင်းပြီး Ning ဆိုဒ်က ဒိုမိန်းဝယ်ပြီး ဆိုဒ်တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်... HIV အေ့စ် ကျမ်းမာရေး.. ပညာပေးဆိုဒ်ပေါ့... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနည်းစုတစ်စုကို ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာပါ.... ဒီလူနည်းအုပ်စုထဲမှာတော့ အောင်လည်းအောင်မြင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကျတော်တို့သူငယ်ချင်းအားလုံး က ဆိုဒ်ကိုလုပ်သာလုပ်ချင်တာ ကုဒ်တွေဘာတွေဘာမှမသိတော့ သမာရိုးကျ ning ဆိုဒ်ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်... ဒီ ချစ်သူ့ မြို့တော်ဆိုရင် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လေ... ကိုယ်လိုချင် တဲ့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ ဟာကိုသွားချင်ရင် မျက်နှာစာပေ့ခ်ျကနေရှာပြီး လိုချင်တဲ့နေရာ..နားထောင်ချင်တဲ့သီချင်း...ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို တန်းပြီးရှာလို့ရတယ်.. အရမ်းလည်း သဘောကျပြီး အဲလိုလုပ်ထားတာကို အားလည်းအားကျတယ်... အဲလိုပညာမျိုးကို ဘယ်သင်တန်းမှာသင်လို့ရလည်းမသိဘူးး.. သိရင်ညွှန်ပြပေးစေချင်ပါတယ်... ဒါမှမဟုတ်... အဲဒီ့နည်းပညာဆိုဒ်ရှိပါသလားခင်ဗျာ.... တတ်နိုင်ရင် ကူညီပြီး ညွှန်ပြပေးပါလို့..... ကူညီပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါ တယ်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Permalink နိုဝင်ဘာလ 13, 2010 တွင် 11:42pm အချိန်မှာ ရာဇာမင်း မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် mp3 song တွေကို size ချုံ့ တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲက ဘာလဲခင်ဗျ ကျွန်တော်လိုချင်လို့ ပါ ခင်ဗျာ တင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးပါလား ဘရားသားတို့ရေ... mmflash song လုပ်ချင်လို့ပါဗျာ
Permalink နိုဝင်ဘာလ 15, 2010 တွင် 12:59pm အချိန်မှာ kyaw min lwin မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကို မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ....
Permalink နိုဝင်ဘာလ 15, 2010 တွင် 1:14pm အချိန်မှာ kyaw min lwin မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကို မင်္ဂလာပါ....
အကို networking အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပါနော်အကို တတ်နိုင်သလောက်သင်ပေးပါဗျာ
Permalink နိုဝင်ဘာလ 15, 2010 တွင် 2:09pm အချိန်မှာ kyaw min lwin မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အကို မင်္ဂလာပါ
flashsong သီချင်းလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေပြောပြပေးပါလား ကူညီပါဗျာ
လက်ဆောင်ပေးရန် akriz king
လက်ဆောင်ပေးရန် athet lay
လက်ဆောင်ပေးရန် august star
လက်ဆောင်ပေးရန် Aung Kyaw Soe
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ☆ℒℴѵe❦ အကြင်နာ(ဆူးလေး)❦Ӂ̴Ʒ☂ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
သစ်ခွဧကရီ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ဧရာဝတီခွန်ကြီး အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
သက်ထား အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
♪♪ Nan Hnin Moe ♪♪ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
© 2015 Created by လူသစ်. Badges | ပြဿနာတခုခုတင်ပြရန် | Terms of Service